Iqabane elitshatileyo - indoda engumfokazi
Uthando lomntu otshatileyo ngumngeni ongunaphakade, obangela ukuphikisana okukhulu kwaye kungekhona izindlu kwidilesi yakhe. Omnye ucinga ukuba kufanelekile, umntu uhlambalaza, kwaye omnye umntu ucinga ukuba le nto ayiyiyo yonke into yakhe kwaye wonke umntu wenza oko intliziyo yakhe ithi kuye. Enyanisweni, uluntu lwethu, lugqithiselwa ngamaqhinga alo kunye nemigaqo kunye kunye nokugweba ukuthatha inceba kwicala. Ngandlela-thile bachanekile, kodwa ngezinye iindlela abayikho. Emva koko, wonke ummashi wokuzonwabisa lwakhe ukhetha indlela eya kuyo, ngaphandle kokuthembela kwimbono yomntu. Intombazana ekhethiweyo ewela "zhenatika" ayinomona nonke, kuba umfazi otshatileyo ungumphambu kwaye kufuneka uhlale nalo. Kwaye emva koko, akulula kuthi amantombazana ahlanganyele imfihlelo yabo nomnye umntu. Ngokukhethekileyo babelane ngothando lomntu onomnye umfazi.
Unxibelelwano olunjalo, njengokungazipholi, luzisa iintlungu ezininzi kunye nemvakalelo kwintombazana. Akukho namnye kuthi ofuna ukuba ngowesibili okanye ngowokuqala, simele sibe yedwa. Akunjalo. Kodwa abaninzi bethu badonsa umbane ongenakwenzeka ngaphambili kule ndoda kwaye asikwazi ukuxhathisa. Ukugxininisa ngaphakathi kwesi sithandwa sothandane. Kwimeko enjalo, loo mfazi ukhuthazwa ngumgaqo omkhulu wemvakalelo, oquka amanqaku amaninzi, esekelwe kwimvakalelo efana nothando, uthando, ngokukhawuleza kunye naye ngesibindi nangokunyaniseka kwizinto zakhe zokubonga. Kwakhona, kwinqanaba elincinci, inyaniso yokuba, nokuba kunjalo, kungekudala okanye kamva iya kuba yam, emva koko, ufanelwe okulungileyo, nguyena, i-scrolled. Kwaye ukuthetha okuthile malunga nokuba umntu otshatileyo ungumfokazi, akukho nto, akunakwenzeka ukuba into iya kutshintsha. Uqaphele ngokuphindaphindiweyo, kodwa ngezandla neenyawo zakho uzama ukuphonsa le nto ingathandeki kude naye.
Yaye uyakugcina ngesimo sakhe esiqhelekileyo, ukuba bonke abafazi bangumzingeli-njengendalo kunye nokubeka iinjongo zabo (kule meko, injongo yindoda), akwazi ukuyeka. Kwaye baya kuzinzakalisa, bahlasele kwakhona. Nantsi kukufanelekile ukucinga ngento yokuba uyayidinga, mhlawumbi kufuneka ushiye yonke into kwaye uhambe nje. Yaye ungazenzeli, uzixhomekeke ekubeni awukwazi ukwenza oko. Nabani na ofuna-uya kushiya, afumane amandla aze anike. Ndikholelwe, ndiya kunika - oku akuthethi ukulahlekelwa nantoni na. Kuthetha nje ukutshintsha ubomi bakho kube ngcono. Kukho abaninzi abaninzi abantu abakhululekile abaza kutshintsha umhlobo wakho otshatileyo. Kwaye ujika kwikosikazi ukuya kwindawo oyithandayo. Yintoni eya kuthatha ukuyijonga ngaphakathi kwakho, ukunqoba ukungaqiniseki kwakho kunye nokuxhomekeka okungavumelekanga ngokupheleleyo. Ukulindela imozulu kwinqanaba lolwandle alukho ukhetho, kwaye ngoko ke ithemba lokuba ngelinye ilanga liya kuba yenu eyona nto, into epholileyo. Ungalinda ukuba ubomi bakho bonke. Ungumfazi wakhe, kwaye ungubani na igama lakho liphi na? Unayo, kwaye ulindele usuku nosuku, ukuchitha ixesha lakho elixabisekileyo kumntu ongalunganga.
Ngako oko, ngaphambi kokuba kungenakunqwenela ukutshisa ubomi bakho ngokuthoba indoda e tshatayo, kufuneka uzinike ingxelo yokuba olu lwalamano, kwiimeko ezininzi, luya kubakho nto. Yithatha nje kwaye uzibukele ukusuka kwicala kunye nangengqondo yakho efanelekileyo uqondisise zonke iingxaki kunye neengxaki zeliveli. Unika iminyaka yakho engcono, kwaye unayo ntoni ngokubuyisela? Iiyure ezimbalwa zokunxibelelana eziliqela ngeveki. Ngaba uyalwela le nto? Unentsapho, kodwa unayo? Uya kuphendula kwaye uza kwenza iphutha elide, kodwa awuyi kuyenza. Akayena wenu nonke, ngokwemithetho yonke, unelungelo kuyo, kuba umtshato ungcwele. Kwaye, nawe, uye wacinga ukucinga malunga nokwakha intsapho. Umntu otshatileyo kule shishini akahambelani nonke - ungowe umntu ongaqhelekanga, ukuba ungaphambuki. Ngoko umntu unokuhlala. Ukuzithethelela ngokwayo iimpawu ezinjengomonde, ukuzihlonela kunye nomnqweno wokulwa nolonwabo. Uze uyiqondise konke ukukhangela umntu okhululekileyo. Yeka ukuyisebenzisa kwiimvavanyo ezingenalutho ukufumana indoda yomnye umntu, ekhangeleka ngobuqili. Akakho kwaye ulungile. Ndingathanda ukuba nani, andizange ndidideke ngekhefu. Indoda yavuya xa wayethandwa kwaye esaba ukulahlekelwa ngabafazi ababini kuphela. Ngenxa yoko, andifuni ukutshintsha nantoni na. Emva koko, bazingca kwaye bacinga ukuba ngokukhawuleza badilize ubomi babasetyhini ababini abayiyo ishishini labo. Cinga ngako, ungaziboni inkxalabo, kuba abafazi bahluke. Bayazi nendlela yokulwa nabo kunye nexesha elifanayo basebenzise yonke ibutho lezempi, baqondise ngendlela yakho. Kwaye isiphelo esihle apha asivumi. Zihawukele - ufanelekile. Kutheni ukhangele iingxaki.
Kwaye, ke, makhe sicinge ngento encinci, yingako uya kushiya intsapho yakhe, eze kuwe kwaye yintoni elandelayo, yiliphi ikamva onayo ngenxa yenu? Indoda eyashiya umfazi wayo, inokukuphosa ngokulula. Umzekelo wentsapho yintsapho, akunakwenzeka ukuba. Emva kokuba sele ehlangene nobudlelwane kwicala, ngubani oza kunika isiqinisekiso sokuthi akayi kukhawuleza okanye emva koko ahambe ngakwesobunxele. Ungakwazi ukuba lula kwindawo yakhe yomfazi wamanje. Kwaye yonke inkazimulo yayo ukuzama imeko yowesifazane otshintshileyo. Ngoko ke uyeke ukuhlala kunye nethemba elingenanto kunye neengcamango. Ndikholelwa kwikamva eliqaqambileyo, apho uhlala kunye kunye nolonwabo. Ukuphela okunjalo kunamabalana kuphela, kwaye ngokuqinisekileyo asikho ubomi bethu boqobo. Ngaphambi kokuba sekwephuzile, mane ubalekele ulwalamano olunjalo. Emva koko, safundiswa ebuntwaneni bethu ngabazali: "ningathathi nantoni na." Ke yena ungowasemzini, kungeyakho.
Kwaye akufanele ukhathazeke ngokunyaniseka ukuba uyamthanda. Musa ukwakha izilwanyana - oku akusilo uthando. Enyanisweni, uthando olusulungekileyo nolusisiseko luhlala luhlangana. Kwaye ukuba umntu uyaphambuka intloko yakho iminyaka, ehlala ethembisa ukuba "iintaba zegolide" kwaye engenzi nto nto, akabizwa ngokuba uthando, kodwa umbala weenjongo zobugovu. Usebenzisa nje wena, ukufumana kuwe oko umkakhe angenako ukumnika. Uhlawulela iimpembelelo zayo kunye neenzuzo zakho kunye nokunye. Kukulungele ukuba uhlale usondele. Kwaye kutheni ufanele utshintshe nayiphi na into. Fumana amandla kuwe uze uqede le meko. Hamba ungaphenduki. Naluphi na, nangona iimvakalelo ezinamandla kakhulu, uphulukisa ixesha, kunye nesifiso sethu esingenakunqwenelekayo sokubakhupha. Ngendlela, umkhonto ukhawuleza kwaye uyinyaniso. Ukuba uqale ulwalamano olutsha, kuphela ngumntu okhululekileyo. Ndikholelwe, emva kokushiya umthandi wakho kwaye, ngokuqinisekileyo, ukusuka kumfazi wakhe, uya kuziva ngokukhawuleza ukuba yiziphi iindiri ezivulekileyo phambi kwakho. Ngoko musa ukuhlala kwindawo enye, vele phambili.
Yintoni enokuyenza ukuqhuba abafana abadengekileyo: iingcebiso kumantombazana
Xa indoda iya kuba nenxalenye yowesifazane
Kutheni umntu eyika ukuthetha ngeemvakalelo zakhe?
I-Salmon ibhaka nge-anyanisi kunye ne-lemon
Ukwakhiwa kweMikhemikhali yemveliso yezonyango
I-thymus ephakamileyo kwiintsana
Iingxowa ngeesafuni zekhofi
Isitya esinomdla kwimenyu yansuku zonke - i-pancake neklabishi, iiresepe kunye neefoto
Ingaba isithende esiyingozi?
Iiprotheni zomzimba, izondlo